eTN Bhutan Tourism Summit yakapedzisa neimba yakazara muNew York
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bhutan Breaking Nhau » eTN Bhutan Tourism Summit yakapedzisa neimba yakazara muNew York
Bhutan Breaking Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Waini & Midzimu
Zvakawanda zvekudya kukuru kweBhutan uye waini inokwezva vanopfuura zana vafambi, vashanyi, uye vatori venhau vakaisa chiitiko manheru ano kune yakazara imba kuMission yeHumambo hweBhutan kuUnited Nations muNew York.
Mutungamiri weDare Rekushanya reBhutan pamwe nemutungamiriri wake wekushambadzira, Damcho Rinzin, akawedzera maonero eRoyal Government yeBhutan iyo yakanamatira zvakanyanya kune mutemo wezvekukosha, kushomeka kwakanyanya / huwandu hwevashanyi hunoshandira chinangwa chekugadzira mufananidzo yekusarudzika uye goho repamusoro reBhutan.
Bhutan inozivikanwa sen yakasarudzika yekushanya yekuenda kunobva paGross National Mufaro (GNH) Maitiro.
Munhu aifara kwazvo neChipiri manheru aive mukuru wePATA New York Chitsauko Simone Bassous. Aive akahwina rombo rakanaka kwemazuva mashanu ezororo kune vaviri kuenda kuBhutan.
Yekutanga Bhutan New York Summit Cocktail neDinner chiitiko chakarongeka uye chakasimudzirwa na eTurboNews (eTN) uye yakapindwa nemuparidzi Juergen Steinmetz, uye mupepeti weNew York mukuru weTN Wines.travel, Dr. Elinor Garely.